कुवेत र कतारमा ३ फरक कम्पनीमा कामदारको माग ! - jagritikhabar.com
कुवेत र कतारमा ३ फरक कम्पनीमा कामदारको माग !
कतार र कुवेतमा नेपाली कामदार भर्ना गर्ने तीनवटा विभिन्न कम्पनी छन्। छत्तीस पुरुष र महिला खोजिएको थियो। मासिक तलब रु. ४२,५२० देखि रु. 1,37,805 अपेक्षित छ। यहाँ वर्षौंदेखि धेरै नेपाली कामदारहरू छन्, साथै अन्य देशका कामदारहरू पनि छन्। तिनीहरू सबै यस कम्पनीको लागि काम गर्न मन पराउँछन् किनभने कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई खजानाको रूपमा व्यवहार गर्दछ र उनीहरूलाई राम्रो मार्गदर्शन पनि प्रदान गर्दछ।
कम्पनीले माथि उल्लेखित प्रत्येक पदको लागि राम्रो तलब प्रदान गर्नेछ। हामी ओभरटाइम काम गर्ने घण्टा प्रस्ताव गर्छौं, तथापि, तिनीहरू कम्पनीको नियम र नियमहरूको अधीनमा छन्। एक हप्ताको कामले छ दिन र दिनमा आठ घण्टा काममा कर्मचारीको उपस्थितिको माग गर्दछ। कम्पनीको नीति अनुसार कर्मचारीले वार्षिक एक विदा पाउनेछन् ।
बसाइको समयमा, कम्पनीले खाना र बासको व्यवस्था गर्नेछ। कर्मचारीलाई आवास र खाना नि:शुल्क उपलब्ध गराइन्छ। यो काममा दुई वर्षको करार हुनेछ र त्यसपछि कर्मचारीले चाहेमा थप दुई वर्षको लागि सम्झौता बढाउन सक्नेछन् । सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव उम्मेद्वारहरूको लागि फाइदा हो।
कागजातमा सूचीबद्ध रकम भन्दा बढी नदिनुहोस् । तपाईंले विदेशमा काम गर्न अघि अभिमुखीकरण मार्फत जानुपर्छ । विदेशमा रोजगारीको लागि, कृपया निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले यात्रा गर्नु अघि देश, कम्पनी, र तपाईंले प्राप्त गर्ने सुविधाहरू होसियारीपूर्वक अनुसन्धान गर्नुहोस्। तपाईंले यसलाई ध्यानपूर्वक पढिसकेपछि मात्र तपाईंले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। यो कागजातको प्रतिलिपि हातमा छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस् । विदेश जाँदा अन्य विमानस्थलको सट्टा नेपाली विमानस्थलको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ, अन्यथा ठगीको सम्भावना हुन्छ ।
यदि तपाईंसँग यस विज्ञापनको बारेमा कुनै प्रश्नहरू छन् भने कृपया वैदेशिक श्रम विभाग, ताहाचललाई सम्पर्क गर्नुहोस् । यदि तपाइँ वैदेशिक रोजगारको बारेमा विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने निम्न निर्देशनहरू महत्त्वपूर्ण छन्